Ny Taombaovao Shinoa tany Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2019 3:19 GMT
(Tamin'ny volana Janoary 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny 29 Janoary 2006 no nanomboka ny Taonan'ny Alika avy amin'ny fanisan'andro manara-bolana Shinoa ary iray tamin'ny fankalazana lehibe tany Malezia ihany koa.
Tsy maintsy misy ny fiaraha-misakafo hariva mandritra ny alin'ny Taombaovao Shinoa, toy ny an'ilay bilaogera Passion Flower, izay tena faly tamin'ny fankalazana izany indray niaraka tamin'ny fiaraha-misakafo hariva mahazatra amin'ny fitsenana ny taombaovao ary niaiky izy hoe ” izahay Shinoa dia afaka mihinana hatrany anatin'ny fonay “. Nanontany ny bilaogera May taorian'ny fiaraha-misakafo hariva raha tokony hanandrana ny vintany amin'ny lalao karatra izy, izay ao anatin'ny fomba fanao Shinoa ihany koa.
Nidera ny fankalazana ny Taombaovao Shinoa ho toy ny tena fetiben'ny Maleziana ilay bilaogera Slickdrums, fa tsy toy ny fetiben'ny Shinoa satria feonkira narindra hifanaraka amin'ny firazanana rehetra ny kolontsain'izy ireo Niantso ny tsirairay izy mba hankalaza ity fetibe ity sy ny fialantsasatra amin'ny fomba Maleziana.
Tonga soa aman-tsara tany amin'ny nalehany kosa ilay bilaogera Simon izay nahatsiaro ho reraka taorian'ny ora maro nitondrana fiara tany amin'ny lalamben'i Malezia Avaratra mitsimo ary tony fa tsy nisy lozam-pifamoivoizana goavana nandritra ny diany.
Raha mankalaza ny taona vaovao amin'ny fomba mahazatra amin'ny alalan'ny famangiana trano ny ankamaroanay, dia nahavita nandefa lahatsoratra miisa 22 tao amin'ny bilaoginy kosa ny The World of Fat 4 saingy tsy nahatratra ny lahatsoratra miisa 40 izay tanjony voalohany tamin'ny fomba tena tiany handraisana ny Taombaovao Shinoa izy. Toy izany ihany koa ny an'i minishorts.net satria efa ela izy no naka aina, noho izany nihevitra izy fa mety ho hevitra tsara ny mamoha indray ny bilaoginy , niaraka tamin'ny fanampian'ilay bilaogera Edrei. Nanome toro-hevitra Feng Shui avy amin'ny manam-pahaizana ao Malezia Lilian Too ny bilaogy Raymond.CC raha vonona ny hifanamby amin'ny maha olondehibe vononkiasa azy ilay bilaogera Hock Lai, araka ny voalazan'ny tononandro.
Niverina tany an-tanindrazany indray ilay bilaogera idealista be fanahiana Kuching avy any Malezia Atsinanana mba hankalaza ny Taombaovao Shinoa izay voalohany tao anatin'ny roa taona raha toa ka nahatsiaro ny tanindrazany tany amin'ny tany vahiny i Bubble Bath saingy nankafy ihany koa izy tany an-toerana, indrindra fa ny fankalazana ny tsipoapoaka izay voarara raha niverina teto Malezia izy.
Iray amin'ireo zavatra tsy maintsy atao amin'ny Taombaovao Shinoa ihany koa ny fandefasana fiarahabàna any amin'ireo namana sy havana. Nametraka fomba hafa tamin'ny firarian-tsoa ho an'ny Taombaovao Shinoa niaraka tamin'ny fianakaviany ilay bilaogera Jolene , tamin'ny fandraketana am-peo ny hafatry ny Taombaovao Shinoa ho an'ny fianakaviana, saingy tamin'ny fombay piraty raha namoaka ny sarin'ny afomanga vitsivitsy kosa ilay bilaogera Edison ho fomba hirarian-tsoa ny Maleziana nahatratra ny Taombaovao Shinoa!
Naleon'ilay bilaogera Justin Wong kosa nankalaza ny taombaovaony tao an-trano nijery Astro (fantsom-pahitalavitra isankarazany mandeha amin'ny zanabolana ) ary nihinana laoranjy, fa tsy nanaraka ny ray aman-dreniny nitsidika fianakaviana. Manaisotra ny maha-Shinoa, izany no ilazany ny tenany.
Noho izany, inona ny fanapahan-kevitrao tamin'ny Taonan'ny Alika raha toa ka nivoady ny tsy hifoka sigara intsony ilay bilaogera Zyban amin'ny Taombaovao Shinoa?
We're thankful that the tapestry of Malaysia is interlaced by threads of understanding, sensitivity and love for one another. The cords that bind us together have stood the test of time. In years to come, let us be rich in the many virtues that cut across race and religion, including the virtues of patience, peace, love and goodwill.
Feno fankasitrahana izahay fa mifamatotra amin'ny tadin'ny fifankazahoana, ny fahatsapana ary ny fifankatiavana ny karipetra ao Malezia. Naharitra tamin'ny fitsapana nandritra ny fotoana ny tady izay mamatotra anay. Ao anatin'ny taona maro hoavy, avelao izahay hanankarena amin'ny hatsaran-toetra maro izay manavatsava amin'ny firazanana sy ny fivavahana, anisan'izany ny hatsaran-toetran'ny faharetana, ny fiadanana, ny fitiavana ary ny fandavantena tsara.
Gong Xi Fa Cai ho an'ny rehetra!